6 maitiro ekuvandudza kushanda kwebhizimusi rako repamhepo | ECommerce nhau
Icho chinonyanya kukosha mukutengeserana kwedhijitari, iyo chokwadi chekuvandudza kugona kwebhizimusi rako repamhepo riri mu DNA yemakambani aya. Kubva panguva yekubata kwayo uye vanovakira chikamu chakanaka chehurongwa hwavo pakuzadzisa izvi zvinangwa zvinodikanwa mubato iri. Kubva pane ino nzira yakasarudzika, zvakakosha kuti usimbise kuti kuita kuongororwa kwakaringana kwehuwandu hwako uye kuiongorora kubva padanho rekutonga kunokutendera iwe kutora matanho akareruka ekuwedzera traffic inokwanisa yechitoro chako uye, semhedzisiro yechiito ichi, zvakare mari.
Kune rimwe divi, zvakakosha kuti kubva ikozvino iwe ubatsire a tab nezve zvigadzirwa zvako, masevhisi kana zvinyorwa zviri pamusoro pezvose zvakajeka uye zvinodzidzisa. Iko zita, rondedzero ipfupi, tsananguro yakadzama, ruzivo rwehunyanzvi, kuoneka kwesitoko, kusimudzira, mutengo, nezvimwe. Saka kuti urege kuita chero mhosho, hauzove nesarudzo kunze kwekuzadza minda yese nokungwarira kubva zvino kuwedzera kukosha kuzvinyorwa zviri muchitoro chako kana kuchitoro chepamhepo.
Uine chidiki diki chausingakwanise kuregeredza panguva ino, sekusakanganwa kuwedzera anokwezva mafoto ayo anobatsira kugadzirisa zvitengwa nevatengi kana vashandisi. Nenzira iyi, isu tiri kuzokuisa pachena kune mamwe matipi anoshanda aunofanirwa kuita kuitira kuti kubva kuchitoro chako kana bhizimusi repamhepo utengese zvakawanda kubva panguva ino chaiyo. Iwe unoda kuziva here izvo zvazvinosanganisira?
1 Kuvandudza kushanda kwebhizimusi rako repamhepo: kukwezva vashanyi
2 Sarudza kurongedza kwakakodzera kwazvo
3 Gadzira zvine musoro kudzoka mutemo
4 Chinja kune dzakasiyana nzira dzekubhadhara
5 Chengetedza zvinoitwa nemakwikwi
6 Tora kuongororwa kwehunyanzvi zano
Kuvandudza kushanda kwebhizimusi rako repamhepo: kukwezva vashanyi
Hapana mubvunzo kuti ichi chinhu chiri kuwedzera kujekesa mukati mekambani. Iko pasina kupokana kuti a traffic inokwanisa Iyo inoumbwa nevashanyi vanowana yako webhusaiti vachizvidira uye vanogona kukubatsira iwe kuzadzisa zvinangwa zvako mune yakanyanya kana zvishoma nguva inonzwisisika yenguva. Iwe unofanirwa kuvafunga nezveizvo zvavari vatengi vanogona kutsvaga ruzivo kana chimwe chigadzirwa. Kusimbisa pamusoro peizvozvo zvese hunhu hunokosha kupfuura huwandu. Usakanganwe izvozvi.
Chimwe chinhu chinokubatsira kuti uwane izvi kubudirira mukutengeserana kwedhijitari ndeyekuvandudza mhando yemifananidzo yauri kuzoburitsa pawebhusaiti yechitoro chako chepamhepo. Mupfungwa iyi, haugone kukanganwa kuti mharidzo yakanaka yebasa rako inogona kukubatsira kutengesa zvigadzirwa zvako, masevhisi kana zvinhu kubva ikozvino. Naizvozvo, ibasa raunofanirwa kuita kusimudzira chako chiitiko chehunyanzvi.
Nepo kune rimwe divi, iwe haugone kukanganwa kana uchigadzira chero rudzi rwezvekutengesa nzira iyo panguva dzese mutengi kana mushandisi anofanira kunge achikwanisa kuongorora chigadzirwa sekunge aive nacho mumaoko ake, nekuti izvi pasina mubvunzo zvichasimudzira chivimbo chekuisa odha. .. Kusvika iyo iyo iyo inogona kutungamira kune kukurudzira kutengesa kwezvigadzirwa zvako uye saka kuti bhizinesi rako riwane purofiti kupfuura pakutanga. Izvi, nokudaro, zvinofanirwa kuve chimwe chezvinangwa zvako zvikuru kubva panguva ino zvichienda mberi.
Sarudza kurongedza kwakakodzera kwazvo
Semumabhizimusi ese epamhepo, kurongedza chikamu chakakosha kwazvo kuendesa hukama hwako nevatengi. Nekuti zvirizvo, iwe unofanirwa kuziva kuti kana pakupedzisira uchitumira zvigadzirwa kana zvinyorwa zvebhizinesi rako mune isina kusimba kana isiriyo kurongedza isingavadzivirire, zvinowanzoitika kuti unoisa njodzi yekuti kukuvara kana chimwe chiitiko chechiitiko panguva yekufambisa. Nemhedzisiro isingadiwe nevese vezvemabhizimusi uye izvo ndezvekuti chokwadi ichi chinokonzeresa kuti mutengi avadzore uye unogona kana kurasikirwa navo kubva pane yako runyorwa rwevashandisi.
Neichi chikonzero, ichi chinofanirwa kuve chimwe chezviito zvaunofanira kuita kuti uvandudze kushanda kwebhizinesi rako. Hazvishamise kuti kurongedza ndechimwe chezvinhu zvakanyanya kukanganisa mabhizinesi ese iri online fomati, uye nekudaro iwe unofanirwa kuitarisira zvakanyanya. Zvekuti pakupedzisira iye anogamuchira zvigadzirwa zvako kana zvinyorwa zvinogutsikana nebasa raunopa panguva iyoyo. Kune rimwe divi, iwe haugone kukanganwa kuti chimwe chezvinangwa zvako zvakakosha mukati meiyi bhizinesi ndechekuti mukupedzisira zvigadzirwa zvako zvese kana zvinyorwa zvinosvika kwazviri kuenda zvakanaka. Pakupera kwezuva ndizvo zvazviri muchitoro chepamhepo kana kutengeserana.
Gadzira zvine musoro kudzoka mutemo
Chimwe chiitiko chekutarisa panguva ino ndicho chine chekuita nekudzoka kwezvigadzirwa zvekambani yako diki kana yepakati. Mune ino pfungwa, hapana zvirinani kupfuura kubva ikozvino zvichienda iwe simbisa yekutengesa zano inoenderana nekumisikidza mutemo we risingagumi anodzoka yemhando ipi neipi uye kubva kwaunogona kubatsirwa nevatengi vako nevashandisi. Nekuti usakanganwa iro izwi remuromo mune izvi rinogona kubatsira vatengi vako kukurudzira vamwe kutenga kubva kuchitoro chako.
Ndichiri kune rimwe divi, ino sisitimu iwe yaunogona kuisa inogona kunge iri nzira yakanakisa yekukwezva vatsva vanogamuchira mune zvigadzirwa zvako. Sekuwedzera kwekurudziro kuti hazvizokubhadhare iwe nhamburiko huru kuzvitanga nekuti iwe unongofanirwa kuve unodisa kuita mhando dzerudzi urwu, sekushandura mutemo wekudzoka mumakambani ako. Mukupedzisira hautange kucherechedza mukubatsira kwebasa rako rehunyanzvi uye pamwe usingazvione zvakanyanya.
Chinja kune dzakasiyana nzira dzekubhadhara
Nzira dzekubhadhara ndechimwe chezvinhu izvo zvinofanirwa kutariswa mukutungamira nekutungamira kwechitoro chepamhepo. Uye neiyi pfungwa, iwe unenge usisina imwe sarudzo kunze kwekusarudza nzira dzekubhadhara chaizvo kubva zvino zvichienda uye zvichienderana ne zvinodikanwa chaizvo zvevatengi vako kana vashandisi. Saka kuti nenzira iyi, havana zvikonzero zvikuru zvekuramba basa rako rehunyanzvi.
Imwe yekiyi dzekubudirira kweyekutengesa zvemagetsi ndeyekutarisira ramangwana uye mupfungwa iyi unofanirwa kugadzirisa mafomu matsva ekubhadhara. Semuenzaniso, zvemagetsi masisitimu kana kunyangwe kugamuchirwa kweimwe yeakanyanya kukosha mari dzazvino. Ichave iri zano rekutanga rekufambira mberi padiki padiki mune rako reunyanzvi chiitiko nekutambira kune ese marudzi marongero evatengi kuti vabhadhare zvavanotenga online.
Chengetedza zvinoitwa nemakwikwi
Mushure mezvinhu zvese zvakapihwa kusvika parizvino, inogona kunge iri mukana wakakodzera kugara pasi nekutora chirongwa chebhizinesi. Unogona kusazviziva, asi chinhu chinogona kukubatsira mune izvi ndechekuti unopa nguva shoma kune tsvaga zviri kuitwa nemakwikwi. Zvekuti nenzira iyi, iwe unoziva zvishoma zvirinani ndedzipi nzira dzebhizinesi dzavanoshandisa kutarisana nematambudziko avo ehunyanzvi.
Pfungwa iyi inoshanda zvakanyanya kunyanya kuti iwe usazokanganisa kubva panguva ino zvichienda mberi. Sezvo iwe uchizoziva iwe pachako-ruoko maitiro ayo vamwe vanhu vakazviona vari mumamiriro akafanana neako iwe avakufanira kupfuura. Naizvozvo, zvakakosha kuti iwe uzviite uye udzidze kubva kune vamwe vanhu nezve izvo zvaunofanirwa kuita kana kusaita muchitoro chako kana kutengeserana kwedigital. Iwe zvechokwadi hauzozvidemba mumakore mashoma anotevera ehunyanzvi basa rako.
Tora kuongororwa kwehunyanzvi zano
Ehe, inguva yekuti iwe uite iri rakasarudzika basa pamberi pebhizimusi maitiro. Dai zvaive nenzira iyi, iwe unofanirwa kutora imwe nzira yekuongorora yakakwana iyo yaunogona kuongorora zvese chigadzirwa pachako, pamwe nemusika wechigadzirwa chawasarudza. Chero zvazvingaitika, zvakakosha kuti uve nechirongwa chaicho mupfungwa. kuti uite chinangwa chako Uye izvo hazvisi izvo zvimwe kunze kwekuita iyo online projekiti iwe yanga uchitsvaga kwenguva yakareba zvakadaro. Nekutsungirira kushoma iwe unozosvika kune ako zvibodzwa kwete pasina kumwe kuedza kune kwako.
Ndichiri kune rimwe divi, iwe zvakare unofanirwa kutarisisa pane chakakoshesa seicho chinotorwa kubva kuchinhu icho chinhu kuitira kuti iwe uve munzvimbo yakakwana yekutengesa zvigadzirwa zvako, masevhisi kana zvinhu. Ichi chikonzero ndechekuti usati watanga bhizinesi iwe watoita kuronga kuti uchaita sei kuvandudza zano rako nezve bhizinesi. Mune mamwe mazwi, hakuzovi nenzvimbo yekuvandudza, asi zvinopesana, zvese zvichave zvakanyanya kana zvishoma zvakarongwa kubva pakutanga.
Imwe yemamwe maitiro ekuwedzera ezviitwa izvi ekuvandudza mashandiro ebhizimusi rako repamhepo rinogara mukuti iwe unenge uine zvivakwa mune rako redhijitari rekutengeserana iro rinogadziridzwa kune rako chairo zvido. Saka kuti nenzira iyi, uye kubva panguva iyoyo zvichienda mberi, zvese zvinokura sezvawakazvitakura pakutanga. Uchave nezvakawanda zviri nyore kuzadzisa zvinangwa zvako kupfuura zvawamboita.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » 6 maitiro ekuvandudza kushanda kwebhizimusi rako repamhepo
Maitiro ekusarudza nzira dzekubhadhara dzechitoro chepamhepo